Darbiga ULAH | Wajiyad barafka lagu ciyaaro | Magnetic
Soo ogow darbiga Naga soo ururinta cusub ee maaskaro barafka!
Xagga isboortiga, qofna looma hari karo, Uller®-na waan ka ognahay tan. Sababtaas awgeed, kooxdeena naqshadeeyayaasha ah ee jecel xorriyadda, isboortiga buuraha iyo tacaburka runta ah, waxay sii wadaan inay shaqeeyaan maalin kasta si ay u keenaan isbeddellada ugu dambeeyay ee maaskaro barafka iyagoo ilaalinaya tayada iyo waxqabadka ugu wanaagsan ee aan ka nimid. sameynta Uller® tan iyo markii aan bilownay. Munaasabaddan waxaan ku soo bandhigeynaa aruurinta cusub ee maaskaro barafka lagu sameeyo iyo kuwa buurta u liita ee aan ka baqayn wax: ururinta cusub ee maaskaro barafka "DARKA"; Kuwani waa afar nooc oo gaar ah oo khaas ah oo x-polar ah oo laysku beddeli karo muraayadaha indhaha ee magnet-ka looguna talagalay tayada iyo raaxada barafleyda iyo kuwa barafka wata ee raba inay gaaraan xadka buurta ... Ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato muraayadaha indhaha barafka ee cusub "Darbiga "?
Laga soo bilaabo Uller® waxaan had iyo jeer dooneynaa in barafka iyo maaskarada isboortiga ay taabtaan kaamilnimada halka aan siinno muhiimada ay u qalanto in lagu moodo adduunka isboortiga buuraha. Muraayadahayaga ayaa si buuxda loogu habeeyay baahiyaha ciyaartoydeena xirfadleyda ah iyo kuwa xoreeyayaasha ah, kuwaas oo og waxa ay doonayaan inay si dhab ah ugu diyaar noqdaan wax qabad!
Sidaad ogtahay, habka kooxdeena Uller® ay suuqa ugu keenaan waji baraf waa marka hore iyagoo uruurinaya dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka u ah fulinta naqshadaynta halkaasna ka fuliya la qabsiga lagama maarmaanka ah illaa laga gaarayo dalabaadka ugu sarreeya. ciyaartooyda. Kadib shaqadan adag, waxaan aakhirkii helnay natiijadii ugu fiicneyd ee aan raadineynay, hadana waxaan rabnaa inaad imtixaanka na geliso!
MASKA MAASKA OO LAGU LEEYAHAY LAYSHAHA MAANKA EE LA ISKU BADALO
Maxay tahay sababta ururinta cusub ee maaskaro barafka ULLER THE WALL® adiga ma kuu tahay?
Moodooyinka ku jira ururintayada Darbiga ULL®® waxaa ka mid ah nidaamka isweydaarsiga muraayadaha indhaha. Nidaam kuu oggolaanaya inaad beddesho muraayadaha indhaha wakhti kasta, iyadoo la raacayo xaaladaha cimiladeed ee daqiiqad ah. Tani waxay ku mahadsan tahay magnets-ka aan ku darnay, marka lagu daro ku xiridda muraayadaha muraayadaha, aad ayey u fududahay in la sameeyo. Qiyaas inaad awoodo inaad ku bedesho muraayadaha indhaha kaliya 2 ilbiriqsi gudahood !!
Waxay kujiraan LABA LAYS oo kaladuwankaas oo aad ku baddelan karto hadba baahidaada kaydka ah:
Muraayadda ugu muhiimsan Qaybta 3, oo ku habboon maalmaha qorraxda.
Nooca 1-aad ee muraayadaha indhaha ah maalmo aragga hoose iyo xaalado liita.
WAKHTIYADA CARRUURTA SHAQADA EE FARSAMADA LAYSKA FURSADAHA FARSAMADA Farsamada X.POLAR
Ururintayada ULLER THE WALL® muraayadaha indhaha Waxaa lagu sameeyay teknolojiyada ugu casrisan ee indhaha adduunka! Iyadoo muraayadaha indhaha Tikniyoolajiyadda Waxqabadka Sare ee X-POLAR Waxaan ku guuleysaneynaa qeexitaan iyo caddayn ka sarreysa sida caadiga ah taas oo u oggolaanaysa wadayaasha inay si fiican ugu qancaan hareerahooda iyagoo leh kala duwanaansho habboon iyo midab qurux badan. Mintidiisa weyn waxay maamushaa inay kordhiso kala duwanaanta iyo daacadnimada dhabta ah ee midabada, sidaas awgeedna ay u hagaajiso aragtida hareeraha iyo gargaarka.
Uller® waxaan ku leenahay tiknoolajiyadda ugu goolasha yar adduunka ee indhaha. Sababtaas awgeed xamaasadeena ayaa annaga nala bilaabeysa mar walbana waxay go'aansadaan inay joogaan. Tani waxay ku mahadsan tahay farsamadeena sare ee waxqabadka 'X-POLAR', taas oo aan ku gareyno qeexitaan ka sarreeya celceliska iyo hufnaanta aragtida, taas oo noo oggolaaneysa inaan ku helno farqi ballaadhan iyo midab muraayadaha indhaha.
Moodelkeena ULLER THE WALL® muraayadaha indhaha oo ay sameeyeen kooxdeena Waxqabadka Farsamada Sare ee X-POLAR waxaa ka mid ah nidaamka isweydaarsiga muraayadaha indhaha. Nidaamkan hal-abuurnimada ah wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si fudud oo dhaqso ah u beddesho muraayadaha indhaha wakhti kasta oo xaaladaha cimilada ee buurta weydiisato.
Waa ku mahadsan tahay sawirrada ay hayaan, isku xiridda muraayadaha indhaha, qaabka ay ugu fududahay in muraayadaha indhaha lagu beddelo laba ilbiriqsi oo keliya. Sanduuqa dhexdiisa waxaan ku darnaa laba muraayadaha indhaha oo kala duwan:
Nooca 3 muraayadaha ugu muhiimsan, oo kufiican maalmaha qoraxda
TAYO IYO KONFURAN
Sidoo kale, ULLER THE WALL® muraayadaha indhaha Waxaa lagu sameeyaa agabka ugufiican si loo gaaro iska caabin weyn iyo adkeysi nooc kasta oo saameyn ah. Kuwani waa maaskaro barafka lagu cabbiro oo cabbirkoodu u oggolaado in lagu tilmaamo inay yihiin unisex, maadaama ay adeegsanayaan wadayaashayada rag iyo dumarba! Muraayadaha 'X-POLAR lenses' oo ka kooban laba lakab oo ah nidaamka 'Dual Layer AntyFog system' ayaa naga caawinaya inaan iska ilaalino qulqulatada dhibta badan ee buuraha ku jirta, isla markaana indhahayaga ka ilaalinayno ilaalinta shucaaca ultraviolet. Tanina had iyo jeer iyada oo la siinayo raaxada iyo fudeydka aan ognahay inay wadayaasheenna u baahan yihiin!
HAWLU WAA MARKA HORE
Kooxdayada Uller® waxay muhiimadda ugu weyn siineysaa fulinta shaqo adag si ay u keento maaskaro barafka lagu ciyaaro oo leh hawo hawo gaar ah oo u shaqeysa wadayaashayada markasta buurta. Wareegga hawo saxan ee laga helo Uller® "The Wall" ookiyaalaha barafka ayaa noo ogolaanaya inaan gaarno raaxo iyo fudeyd sida midna aan suuqa oolin. Nidaamkeena hawo qaadistu wuxuu yareeyaa dareenka kuleylka sidaa darteedna wuxuu yareeyaa suurta galnimada dhidid wejiga ah, maadaama maaskaro barafka lagu ciyaaro ay leeyihiin hawo iyo hawo hore si ay hawada ugu wareejiso si dhakhso ah oo toos ah. Ma aha in la iloobo lakabka xumbada ee aan ku leenahay inta u dhaxeysa muraayadaha indhaha iyo dusha sare ee wajiga, kaas oo bixiya raaxo iyo is waafajin dhameystiran himiladeena ah in indhaheenna laga jecel yahay waxqabad kasta oo aan ku qabanno buurta.
Iyo sidii oo aysan taasi ku filnayn ... Iska ilow inaad ku mashquusho waxyaabaha cusub maaskaro barafka WLLKA DARADA®! Daaweynteeda antifog waxay ka dhigeysaa maalmaha kulul, ama inta lagu jiro dhaqdhaqaaqa aerobic ee kor u kaca, maaskarada barafka ayaa yareyneysa qulqulatada ay keento faraqa heerkulka u dhexeeya banaanka iyo gudaha. Sidaa darteed, wadayaashayadu waxay dareemayaan gabi ahaanba raaxo ay ku qabtaan nooc kasta oo nashaad ah mahadnaq:
Muraayadaha laba-geesoodka ah (laba lakab) oo leh ilaalin UV-400
Daaweynta Antifog (ka hortagga ceeryaanta)
MASKAXADA MASKAXDA ISKU XIRAN OO KU LEEYAHAY QALABKA KA HORTAGA LACAG-LA'AANTA
Dabcan, ma hilmaami karno faahfaahin ballaaran oo ku saabsan maaskaradayada 'marshooyinka'! Ururinta maaskaro barafka Darbiga ULL®® Waxaan sidoo kale diirada saarnay oo ay ka mid yihiin ka hortagga siibashada iyo xargaha hagaajinta la isku hagaajin karo oo ku habboon dhamaan noocyada kala duwan ee madaxa iyo wejiga, iyadoo ujeedadu tahay in maaskarada barafka ay sii ahaato mid adag oo aan suurtagal aheyn in la siibto. Intaas waxaa sii dheer, waxay sidoo kale la jaan qaadi karaan nooc kasta oo koofiyad ah oo ay wadayaashayada ama xirfadlayaal isboorti ku fulinayaan hawsha!
QIIMO BADAN SKI AQOONSIGA PREMIUM
Ururintayada maaskaro barafka Darbiga ULL®® Iyaga waxaa abuuray oo loogu talagalay xoreeyayaasha. Had iyo jeer waxqabadka farsamada ugu sarreeya si loo damaanad qaado waxqabadka ugu wanaagsan iyo kalsoonida ugu badan ee xaaladaha ugu daran inta lagu jiro tababarka Freeride. Dhammaan nashqadeynta maaskarada barafka waxaa loogu talagalay baahiyaha ay kooxdeena xayeysiinta ahi ka dalbadaan badeecada, xagga qalabka iyo raaxada. Adiguna, miyaad ku dhiiran kartaa inaad tijaabiso ururintayada cusub oo aad runtii ku raaxaysato astaamaha farsamo ee aan bixinno? Had iyo jeer loogu talagalay kuwa xorriyadda u leh qalbigeenna, oo leh rabitaanka ah inay ku noqdaan buuraha!
Uller® waa astaanta rasmiga ah ee kafaala qaadaysa: Grupo Aramon (Formigal, Panticosa, Cerler, Javalambre iyo Valdelinares), Astún, Altitude HeliSki Aragón, Whistler Wander, Boi Taüll iyo El Dorado Freeride.
Moodada indhaha Hadiyadda ugu fiican ee lagu bixiyo Reyes!
Xaqiiqdii waxay noqon doontaa hadiyadda ugu fiican! Muraayadaha muraayadaha indhaha oo ku habboon ragga iyo dumarka labadaba waxayna si fiican ula jaanqaadaan dusha wejiga si ay u yeeshaan dhammaan firfircoonida suurtagalka ah ee edbintu dalbato
Noo sheeg maaskaro barafka aad isticmaasho waanan kuu sheegi doonaa cidda aad tahay!
Laga soo bilaabo Uller create waxaan ka abuuraynaa waji baraf barafka lagu dulfuulo iyo barafka lagu kiciyo ama lagu xereeyo. Waan ognahay in buuraha, shakhsiyadda iyo qaabku ay yihiin wax aad muhiim ugu ah ciyaartoydeena. Raac
Ugu dambeeyay muraayadaha indhaha Barashada Uller Snowdirft cusub!
Uruurintayada muraayadaha indhaha ee ULLER SNOWDRIFT® waxaa lagu sameeyay teknolojiyadda indhaha ee ugu casrisan adduunka! Waxay ka mid yihiin nidaamka isweydaarsiga muraayadaha indhaha. Ma taqaan tiknoolajiyadeena
Muraayadaha barafka lagu xiro oo leh muraayadaha laysku beddeli karo ... Ka muhiimsan sidaad moodeysay!
Had iyo jeer waa inaan u qalabeynnaa sida ugu macquulsan. Ilaalinta aragtideena iyo indhaheena waa muhiim, isla mar ahaantaana waa inaan la qabsano xaaladaha cimilada ee halkaas
Muraayadahayada ugu iibinta badan sannadaha 2020!
In kasta oo xaqiiqda ah in sannadkan 2020 uu ahaa mid aan caadi ahayn, haddana Uller® waxaan dooneynay inaan sii wadno bixinta xorriyadeena iyo cayaartoydeena tayada ugu sarreysa ee ugu macquulsan si khibradda cayaaraha loo sii wado in la dareemo.
Shaki la'aan dhamaanteen waxaan cod dheer ku dhahnaa: GUUL 2020! Runtii waa sanad xagjir ah ... waxaan fahamsanahay in runtii ay ahayd sanadkan, adag in la fahmo, adag in la sharaxo iyo waliba in laga adkaado, ... LAAKIIN